QUARTZITE VS GRANITE (ISIKHOKELO SOYILO LWECOMPUTER) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Quartzite vs Granite (Isikhokelo soYilo lweComputer)
Quartzite vs Granite (Isikhokelo soYilo lweComputer)
Wamkelekile kwisikhokelo se-Quartzite vs Granite yoyilo kubandakanya umahluko phakathi kwabo, iimpawu zabo, imibala ethandwayo, indleko kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi.
I-Quartzite kunye ne-granite zizinto ezimbini ezithandwa kakhulu kwi-countertop kwimarike. Zombini ezi zinto zenziwe ngamatye endalo zibonelela ngezibonelelo ezininzi kwaye zibonakalise ukuba kufanelekile kutyalo-mali kumakhaya.
Nangona kunjalo, kukho umahluko okhoyo phakathi kwezi zinto zimbini. Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi i-countertop yamatye ogqiba ukuhamba nayo, ukwazi iimpawu zabo kuncedo kakhulu ngaphambi kokuba wenze isigqibo sokugqibela njengoko uceba kwaye uyila ikhitshi lakho.
Apha ngezantsi, sijonga ngokunzulu kwiimpawu ezahlukeneyo ze-quartzite vs granite, kunye nezinye izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ukukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eya kulungela iimfuno zakho, isitayile kunye neemfuno.
Umahluko phakathi kweQuartzite kunye neGranite
Iimpawu zeQuartzite vs Granite
Ixabiso leQuartzite Vs Granite
I-Granite Vs Quartzite Countertops Pros kunye ne-Cons
Iinkonzo zeCranite Countertops
Bendlela imiphezulu yeetafile Granite
Iimveliso zeQuartzite Countertops
Umthengi wee-Quartzite Countertops
Quartz Vs Quartzite Vs Granite
Ikhitshi kunye noPI-latinum Velvet Grey quartzite.
ukuba wenzeni xa uthembisa
Zombini i-quartz kunye negranite ngamatye endalo, nangona kunjalo ayahluka ngokwendlela yokwakheka kwezinto ezibonakalayo. Ngokwenkcazo, Quartzite yinto eyenzeka ngokwendalo Iliwa leemethamorphic Oko kuyenziwa xa ilitye lentlabathi elityebileyo le-quartz liphantsi kobushushu obuphezulu, uxinzelelo olukhulu kunye nomsebenzi weekhemikhali we-metamorphism. Granite , kwelinye icala, yi ilitye elingenamanzi yenziwe kwimagma epholileyo. Inxalenye yequartz kunye nomxube wezinye izinto. Inkqubo yokupholisa eyenziwa yigranite ivumela ukuba kubekho iikristali ezinkulu zezimbiwa.
Zombini i-granite kunye ne-quartzite zenza izinto ezithembekileyo zokubala, kwaye nganye yazo ineempawu zayo ezizenza zahluke. Masiqwalasele ngokuthelekisa ukuthelekiswa kweempawu ezahlukeneyo ze-quartzite vs granite:
Ikhitshi kunye noFantasy uBrown imiphezulu yeetafile lenyengane .
Izinto zokwenziwa. Zombini i-quartzite kunye ne-granite ziqulathe i-quartz yamaminerali, kodwa imali ekuyo iyahluka. Kukho i-quartz engaphezulu kwi-quartzite, enyanisweni, ine-90 ukuya kwi-99 yeepesenti yeenkozo ze-quartz. Eli licandelo abafumana kuwo amandla abo.
Ngakolunye uhlangothi, i-Granite yenziwe ngamakhemikhali e-mineral adibeneyo, eyona nto ixhaphakileyo yi-quartz kunye ne-feldspar. Izinto ezenziwayo zenziwe ngegranite zinokwahluka ngohlobo lwayo, olwenza ukuba isiqwenga ngasinye sibe sodwa. Igranite emhlophe , umzekelo, unemaminerali emhlophe ebizwa ngokuba yi-feldspar. Nyengane emnyama Ngokwesiqhelo yenziwe nge-mica, ngelixa i-granite enemithambo ekhanyayo engwevu ine-quartz eninzi kuyo.
Ukuxhathisa kunye nokuXhathisa kokufuma. I-Quartzite kunye ne-granite ngamatye endalo, oko kuthetha ukuba zombini zinobushushu ngokwendalo. Nangona kunjalo, i-quartzite iyajiya kwaye inzima kunegranite, ethi yona iyenze ingabi nakuthanda kakhulu. Phakathi kwamatye amabini endalo, imiphezulu yeetafile yequartzite inokufuna ukutywinwa okungaphantsi kuneemiphezulu zeetafile zegranite.
Umnwe womtshato womfazi
Xa itywiniwe ngokufanelekileyo, zombini ii-quartzite kunye neetafile zokubala ziyaba ngumswakama kwaye zinganyangeki. Nangona kunjalo, ukuba uphalaze into ethile kumphezulu wabo, kusacetyiswa ukuba ulwelo lucinywe ngokukhawuleza ukunqanda ukungena kwilitye.
Ubunzima. IQuartzite inzima kunegranite. I-Granite iyaziwa ngokuba yinto enzima kakhulu. Kwelinye icala, iQuartzite, ibunjwe phantse yeyona nto inzima emhlabeni, eyi-quartz. Inkqubo ye-metamorphic ehamba ne-quartzite iphinda iphinda isebenzise iinkozo zesanti kunye nesamente yesilica ebabophelelayo, ethi yona yomelele kwaye ibenzima. Kwinqanaba le-Mohs lobunzima (1 ukuya kwi-10, kunye ne-10 yeyona nto inzima kakhulu), i-quartzite inezinga le-7 ngelixa i-granite ilinganisa i-6 ukuya kwi-6.5.
Ukuzinza. Ukuba ukuhlala ixesha elide yinto yakho yokugqiba izinto eziphathekayo, i-quartzite yinto efanelekileyo yokukhetha. I-Quartzite yaziwa ngokuba yenye yezona zinto zixineneyo kwindalo emhlabeni, ekwenza ukuba ibe yinto yokwakha ehlala ixesha elide kakhulu. Kuyamelana ngakumbi nokunxiba kunye nokukrazuka ngokuthelekiswa nezinto ezininzi zokubala. IGranite, kwelinye icala, yiyoyaziwa ngokuba namandlakunye nokukwazi kwayo ukumelana nokusetyenziswa rhoqo njengecomputer. Nangona womelele ngokwawo, inyengane ayomelele njengequartzite- ukuba kukho into enzima ewela kuyo, imiphezulu yeetafile yegranite inokuqhekeza okanye yaphule, ngakumbi ezimbombeni.
Nangona kunjalo, zombini i-granite kunye ne-quartzite banokumelana nobushushu. Banokumelana nezinto ezishushu zekhitshi ezinje ngeembiza okanye iipani ezibekwe ngaphezulu.
Zombini ezi zixhobo azonakalisi ngokulula kwaye zithembeke kakhulu, kodwa phakathi kwezi zimbini, i-quartzite inomphetho omncinci wokuqina kuba kunzima.
Inkangeleko kunye nobuhle. Esinye sezibonelelo ezilungileyo zegranite kunye nequartzite bubuhle obahlukileyo ababunikelayo. Ukuba ngamatye endalo, unokuqiniseka ukuba akukho zilebhu zimbini ezifanayo kwaye iipateni zahlukile.
I-Quartzite ibonakaliswa ngumbala weglasi kunye nephethini ye-vein ejikelezayo eyenza ukuba ifane ngokufana nemarble. Ukubonakala kwayo okunethezeka kwenza enye yezona zinto zifunwa kakhulu kwiimarike. I-Granite, kwelinye icala, ihlala inebala elinamachokoza ngokwahluka kweepateni ezahlukeneyo. Amakristali amakhulu kunye neencindi ezincinci zezimbiwa zihlala zibalaselisa umphezulu wamatye. Ezinye izitayile zegranite zinokukunika ukubonakala kwamanye amatye endalo njengeemabhile.
Xa kuziwa kwinkangeleko, konke kwehla ukuba yeyiphi indlela ocinga ukuba ikhitshi lakho ngayo. Ukuba ufuna into entle kwaye ethandekayo, i-quartzite yeyona nto ubheja ngayo. Imiphezulu yeetafile zeQuartzite lukhetho olufanelekileyo kwiikhikhini zeetoni ezingathathi hlangothi. Ngenye indlela, ukuba ufuna iindidi, igranite ibonelela ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo. Ingena kuluhlu olubanzi loyilo lwekhitshi, nokuba lolwemveli okanye lwanamhlanje. Kwakhona kulula ukufumana inyengane enokutshatisa izikimu ezahlukileyo zombala.
Iindwendwe zomtshato zomtshato zokuwa
Ukwahluka kombala. I-Granite iza ngemibala emininzi kune-quartzite. I-Quartzite inokufumaneka ngokukhanyayo kwimibala emhlophe kunye negrey, kodwa ezinye zeentlobo zayo ziyafumaneka ngokuhlukahluka kombala, kuxhomekeke kumxholo wezimbiwa. Ngenxa yemibala emiselweyo abangena kuyo, i-quartzite ikhethwa ngakumbi kwiikhitshi zeetoni ezingathathi hlangothi.
I-Granite iza kuluhlu olubanzi lwemibala-ukusuka kumbala omdaka, obomvu, luhlaza umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama, ngwevu nomhlophe. Isizathu sombala owahlukileyo wegranite bubukho beekristali ezahlukeneyo ngexesha lokuyilwa kwayo. Ngaphandle kwemibala emininzi yemibala, iqhekeza elinye lenyengane linokudibanisa imibala eyahlukileyo. Umzekelo, iSanta Cecilia inyengane inombala ofudumeleyo wombala oqukethe umbala omdaka, igolide, xabiso kunye nomnyama. Imibala eyahlukeneyo yemibala ekhoyo kwi-granite yinto eyongeziweyo ngokwe-aesthetics kuba njengokukhanya kubetha i-countertop, i-undertones ibonakalisiwe kwaye kuveliswa umphumo oqaqambileyo.
Ulwenziwo. Zombini i-granite kunye ne-quartzite zinokunqunyulwa ngokobungakanani obuchaziweyo. Nangona kunjalo, ukwenza ngokwezifiso kuncinci ngakumbi xa kuthelekiswa nezinto zokubala zokwenza izinto. I-Granite kunye ne-quartzite, ekubeni ngamatye endalo, kunzima ukwenza ubujamo obahlukeneyo, ngokungafaniyo namatye enjineli njenge-quartz, enokuthi ibunjwe nangaluphi na uhlobo ngexesha lokuvelisa.
Ukugcinwa kweKhawethi. Xa kuziwa kulondolozo, imiphezulu yeetafile yegranite kunye nequartzite zifuna iinkqubo ezifanayo. Zombini izixhobo zokubala kulula ukuzicoca, enyanisweni, ufuna kuphela ilaphu elinamanzi ashushu kunye nesepha ukusula umphezulu. Zombini i-quartzite kunye ne-granite zinobuntununtunu kwizicoci ezirhabaxa ezifana neblitshi.
Njengalo naliphi na ilitye lendalo, imiphezulu yeetafile yequartzite kunye negranite kufuneka zitywinwe kwaye ziphinde zitywinwe amatyeli amabini amaxesha amabini ngonyaka ukukhusela ubuso bayo ekungcoliseni kunye nokukhusela ulwelo ekungeneni kulo. Ukutywina akuhlali ngonaphakade kwaye kufuneka kusetyenziswe kwakhona amaxesha ngamaxesha. Ukutywinwa okufanelekileyo kuya kuqinisekisa ukuba imiphezulu yeetafile zamatye zendalo zihlala iminyaka.
ukubopha iqhina essie
Ngokubanzi, imiphezulu yeetafile zegranite kunye nequartzite zinokuhlala zikwimeko ephambili ukuba zikhathalelwe ngokufanelekileyo.
Ukufakwa. Ngokubhekisele kuzo zombini ii-countertops ze-quartzite kunye ne-granite, kuya kufuneka uqeshe ubuchwephesha bokuzifaka. Ngaphandle kwento yokuba zinzima kakhulu, imiphezulu yeetafile zamatye zendalo azikhuthazwa ukuba zenziwe nge-DIY'ed. Ukuqesha ingcali kuya kuqinisekisa ukuba umsebenzi wenziwe ngokuchanekileyo nangokukhawuleza, ngelixa unciphisa ngokubonakalayo amathuba okonakala okwenzeka ngexesha lofakelo.
Ixabiso lokuhlaziya. Ekugqibeleni, ukuba neetafile zamatye zendalo kunokunika ikhaya lakho ukwanda kwexabiso. Imiphezulu yeetafile zeQuartzite kunye negranite zifunwa kakhulu kungekuphela ngenxa yobuhle bazo bendalo kodwa kunye neempawu ezintle ezichazwe apha ngasentla. Ngethuba nje unakekela ngokufanelekileyo iiplati zakho zamatye zendalo. Nabaphi na abathengi abanokubakho baya kutsaleleka ekubeni nabo njengenxalenye yamakhaya abo. Ngapha koko, xa kufikwa kwixabiso lokuthengiswa kwakhona kweetheyitile zendalo, abaninimzi bafumana iipesenti ezili-100 okanye ngaphezulu kweendleko zabo zokufaka.
Nangona kunjalo, i-quartzite inomphetho omncinci kwi-granite xa isiza kweli nqanaba. Isizathu kukuba iquartzite lilitye elinqabileyo kakhulu, xa kuthelekiswa negranite esetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwizicelo zekhethi yokuphamba.
Iindleko .I-Granite lukhetho olufikeleleka ngakumbi kune-quartzite. Unokufunda isishwankathelo esinexabiso ngakumbi malunga nexabiso legranite vs quartzite engezantsi.
Ixabiso le-quartzite (lezinto eziphathekayo okanye ilitye kuphela) lijikeleza i- $ 60 ukuya kwi-100 ngeenyawo zenyawo, kodwa amaxabiso angadlulela ngaphaya koko kuxhomekeke kudidi kunye noyilo lwelitye. I-Granite yexabiso eliphantsi njengoko ixabiso layo liqala malunga ne- $ 40 ngenyawo lesikwere. Iindidi eziqhelekileyo zegranite ezithathwa njengeziphelo eziphezulu zinokuxabisa ukuya kuthi ga kwiidola ezili-100 ngonyawo wesikwere.
Iquartzite ibiza kakhulu kunegranite ngenxa yenani lezinto- esona sizathu siphambili kukuba kunqabile. Eminye imiba echaphazela ixabiso layo yindawo kunye nokunqongophala kwesilayidi. Ezinye iizilebhu zisenokungafumaneki ngokulula ekuhlaleni kunye neendleko zokuzuza.
Enye into ebalulekileyo yinkqubo yokusika ngobuchule ebandakanyekayo kwimveliso. I-Quartzite slabs zifuna izixhobo ezizodwa zokusika kuba zixinene kwaye zinzima. Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokubala, kunzima ukusika nokugqiba i-quartzite.
iilokhwe ozinxiba emtshatweni
Apha ngezantsi kukho izibonelelo kunye nokungalunganga kweetafile ze-quartzite vs granite:
Granite unikeza bhetyebhetye uyilo kunye nsimbi. Iza ngamakhulu emibala kunye neepateni, ikunika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo. Nokuba yeyiphi na ikhitshi lakho, nokuba yeyesiko, langoku, ilizwe okanye ele mihla, unokufumana imibala lenyengane eya kuyilungela.
Granite ilitye elilodwa elinobuhle obumangalisayo. Akukho zixhobo ezimbini zegranite ezifanayo - oku kuthetha ukuba i-countertop yakho yekhitshi ayiyi kufana ngokufanayo nabanye abaninimzi abane-granite. Ukongeza kokungafaniyo, inyengane nayo intle kakhulu kwaye inokwenza isibheno esihle ekhitshini lakho.
Granite iyafikeleleka. Ixabiso legranite libiza kancinci xa kuthelekiswa namanye amatye endalo afana nequartzite, imarble, travertine, ilitye lesepha, ilitye elinqabileyo, ilitye lekalika kunye neoniks. ngaphandle kwexabiso eliphantsi kunabalingani bayo, ibonelela ngezibonelelo ezininzi ezilungileyo, ezenza ukuba kube kukhetho olusebenzayo nolusengqiqweni.
I-Granite inezinto ezininzi kwaye ifumaneka ngokulula kwimarike. Esinye sezizathu zexabiso elifikelelekayo legranite kukubonelela kwayo okuninzi. Akunqabile kwaye unokufumana igranite ngokulula kuninzi lwabathengisi bendawo.
Granite yi ubushushu ukumelana, ekuqaleni ukumelana kunye nemichiza ukumelana. I-Granite iyakwazi ukumelana nobushushu, oko kuthetha ukuba ungabeka iipani ezishushu ngokuthe ngqo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokonakalisa ii-countertops zakho. Iyaqala ukumelana nokukrwela kwaye ayizukulimala kwizinto ezibukhali njengeemela. Okokugqibela, igranite iyamelana namachiza kwaye ayizukufumana ibala kwizinto zeasidi.
I-Granite inzima kwaye ihlala ixesha elide. Olunye lweempawu ezixabisekileyo zegranite kukuhlala kwayo. I-Granite, ngokwemvelo, yinto enzima kakhulu kwaye ayiyi kubonakaliswa lula. Iyakwazi ukumelana nokuwohloka kwemihla ngemihla kunye nokuqhekeka kwaye inokuhlala ixesha elide ukuba ikhathalelwe.
Ukuwisa izinto ezinzima kuyo akuyi kuyibangela ukuba iqhekeke, idibanise okanye iphule. Unganqunqa, uxhele inyama okanye uthambise inyama kuyo, uqhekeze oononkala okanye ugalele igalikhi kuyo kwaye kunjalo, ngekhe yonakale.
Imiphezulu yeetafile zakhiwe kulula kakhulu ukuba ukucoca. Ngaphandle kokuba imiphezulu yeetafile zakho zegranite zitywinwe ngokufanelekileyo kwaye ziphinda zitywinwe rhoqo, zinokucocwa ngokulula kusetyenziswa ilaphu elifumileyo kunye namanzi afudumeleyo.
I-Granite idinga ukutywinwa kwexesha. Ngokungafaniyo nemiphezulu yeetafile zamatye ezenziwe ngobunjineli kunye nezenziwe ngobunjineli, imiphezulu yeetafile zegranite kufuneka zitywinwe kwaye oku kuya kufuneka kwenziwe unyaka nonyaka ukuqinisekisa ukuba ulwelo alungeneli kumphezulu walo. Ukusilela ukuphinda usete imiphezulu yeetafile zegranite kuya kuyenza ibe ngacocekanga kuba ukubumba kunye nezinye iibacteria zinokwakha kumphezulu wayo xa ulwelo lungene kumphezulu walo. Le nkqubo yolondolozo ikwaguqula inkcitho eyongezelelweyo ekuhambeni kwexesha.
I-Granite ayinakuhlala kwisitayela ngonaphakade. Eminye imibala yegranite, ngakumbi leyo ingaqhelekanga, inokuphelelwa lixesha kwaye ayizukuhlala isimbo ngonaphakade.
I-Quartzite intle kakhulu kwaye inika umbono ococekileyo. Olunye lweempawu ezomeleleyo ze-quartzite bubuhle bayo obuntsonkothileyo, Inokubonelela ngokulula ngobuhle, ukuziva okutofotofo kunye nokujonga okucacileyo kwisithuba.
I-Quartzite ihambelana ngokufanelekileyo nezitayela zangoku kunye nezangoku. Inkangeleko egudileyo kunye nokuthungwa kwequartzite kufana nokubonakala okucocekileyo kunye nokucocekileyo kwezitayile zangoku kunye nezangoku. Imibala yayo ikwancedisa iipelethi zeetoni ezingathathi hlangothi - ezifumaneka ngokuphakathi ngaphakathi kwanangoku.
I-Quartzite inembonakalo yemarble - thabatha iingxaki. Njengoko sele kukhankanyiwe, iquartzite inobuhle obufanayo njengemabhile, kodwa yomelele, yomelele kwaye ayibizi kakhulu.
I-Quartzite ihlala ixesha elide. I-Quartzite yenye yezona ndawo ziphambili zamatye ezomeleleyo ezikhoyo kwimarike. Ayizukumoshakala ngokulula kwaye ibonakalise ukuba ingutyalomali olukhulu ngenxa yobude bexesha layo.
I-Quartzite iyakwazi ukumelana nomlilo, ukumelana nobushushu kunye nokumelana nokukrwela. Kanye njengegranite, iquartzite nayoukumelana nobushushu, ukukrwela kunye nokusabela kweekhemikhali. I-Quartzite inokumelana nobushushu kakuhle ukuze ungakhathazeki ngomonakalo osuka kwiimbiza ezishushu kunye neepani. Ayizukukhuhla nokuba usebenzisa imela ngqo kuyo.
I-Quartzite iyamelana ne-UV. Imitha ye-UV inokubangela ukuba amatye endalo aphele kwaye aphume umbala, ke kuya kufuneka ulumke ekukhetheni izinto zeendawo ezichanabeke ekukhanyeni kwendalo. I-Quartzite iyamelana nemitha ye-UV, oko kuthetha ukuba ilungele useto lwangaphandle kunye neekhitshi ezisemva kwendlu.
I-Quartzite incinci kunamanye amatye endalo. Xa kuthelekiswa negranite kunye nemabhile, iquartzite incinci.
I-Quartzite kulula ukuyigcina. Awudingi izixhobo ezikhethekileyo kunye nezinto zokucoca i-quartzite countertop. Ungayisula ngokulula ngelaphu elifumileyo kunye namanzi afudumeleyo.
I-Quartzite iza ngemibala embalwa. I-Quartzite iza ngokukhanya kunye nemibala embalwa-ubukhulu becala iithoni ezingathathi hlangothi. Imibala emiselweyo inokuba sisiphoso xa kufikwa kumba wokuguquguquka koyilo.
I-Quartzite inokufuna izixhobo ezingaphezulu ekusikeni. Ngenxa yokuba kunzima kangakanani, i-quartzite slabs ifuna izixhobo ezizodwa zokusika ngexesha lofakelo. Ukuba uza kusebenzisa iincakuba eziqhelekileyo, kuya kuthatha ixesha elide kwaye kufuneka wenze iipasile ezininzi ukusika ngokugqibeleleyo. Ikwabangela ukonakala kunye nezixhobo ezisetyenziselwa ukusika nokuyila.
I-Quartzite ibiza kakhulu kunamanye amatye endalo. I-Quartzite ibiza kakhulu kunamanye amatye endalo afana negranite kunye ne-travertine.
I-Quartzite ithambekele ekubambeni. I-Quartzite inesiphene esithile esingenakufumana kwezinye iitafile zamatye zendalo, oko kukuthi ukudibanisa . Ubukhulu becala, i-quartzite iyamelana nokusabela kweekhemikhali, nangona kunjalo ezinye ii-slabs ezine-calcium carbonate zisabela kwizinto ezine-asidi.
Yintoni etching? Xa izinto ezinomhlaba zidibana ne-quartzite slabs, impendulo ivelisa ukonakala komphezulu obonakaliswe luphawu olucekeceke kwilitye lendalo- oku kubizwa ngokuba ukudibanisa. Ezinye izinto eziqhelekileyo zekhaya ezinokubangela ukutsalwa kubandakanya iilamuni, iisoda, ketchup kunye nezinye iimveliso zokucoca.
Nge-etching encinci, i-quartzite slab isaziva igudile. Oku kusenokususwa kusetyenziswa ipowder yokupolisha. Ukutsalwa nzulu, kwelinye icala, shiya ukuziva okurhabaxa phezu komhlaba kwaye kujongeka ngathi kunamafu. Ukulungisa le nto, kufuneka ufune uncedo lobuchwephesha bokubuyisela ilitye.
Kukho amanyathelo othintelo onokuwathintela ukuthintela ukuntywila kwimiphezulu yeetafile ze-quartzite. Eyona iqhelekileyo kukufaka itywina elitywinwe, elinika umaleko ongaphezulu wokhuseleko kwi-countertop yakho. Ukukhetha ukugqibezela okugqityiweyo ngaphezulu kokugqitywa okuphosiweyo kuyanceda kuba eyangaphambili ayinabungozi bokuba nomonakalo ngenxa yokuthambeka kwayo, ukuthungwa kwe-matte.
I-Quartz yenye yezinto eziphathekayo kwi-countertop eqhubeka nokuphakama ekuthandeni kwindawo yoyilo lwekhitshi. Rhoqo, i-quartz iphazama nge-quartzite kuba igama labo livakala ngokufanayo. Kodwa musa ukudideka kuba ezi zinto zimbini zahluke kakhulu kwezinye.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neempawu zekartz kunye nothelekiso lwayo olunenkcukacha nequartzite, intloko kwisikhokelo sethu esisemthethweni Quartz Vs Quartzite .
ingcebiso yomtshato ehlekisayo kwintetho esandula kutshata
Yintoni oza kuyinxiba kumtshato wase-Indiya